EXPERIENCE Sun Master dia hita tamin'ny taona 1996. Ny mpiara-miombon'antoka dia ahitana marika F & B sy hotely fanta-daza, toa ny Guangzhou Shanglian Thai Restaurant sy ny Playcafe & Restaurant "A-one" Libya "A-one". Taorian'ny fitomboan'ny 25 taona dia nanana traikefa lalina izahay, teknolojia matihanina, rafitra matotra. Ao amin'ny addit ...
Araka ny fombanao haingo na dia ampiasaina ho an'ny ety ivelany aza ny fanaka, nefa mila mifanentana amin'ny fomba fanaingoana ankapobeny koa hisafidianana. Raha te-hametraka fanaka ivelan'ny trano eo an-davarangana na patio ianao, dia tokony hodinihinao hoe iza avy no haingo anao. Avelao izany belo ...
Ny Sun Master dia tsy fanamboarana fanaka ivelany any ivelany fotsiny izay manana traikefa 20 taona mahery tamin'ny mpanamboatra fanaka zaridaina sy mpamatsy seza kafe, fa ny orinasa mpamorona endrika vaovao kosa dia maodely maherin'ny 30 isaky ny vanim-potoana. Manokana amin'ny patio armrest cha ...
Fomba manakaiky ny antsipirian'ny fanaka eny ivelany
Sun master dia mitambatra amin'ny fomba feno amin'ny antsipiriany momba ny fanaka ety ivelany Izany no antony hanandramantsika manao fanaka Sun master manintona ary miaraka amin'izay dia mahasarika voajanahary, noho ny endrika sy ny fitaovana ampiasaina, dia te-hikasika hatrany ny olona iray. ...
Fiainana mahafinaritra any ivelan'ny habakabaka miaraka amin'ny fanaka ety ivelany
Ny zaridaina sy ny lavarangana dia afaka mamorona fiainana lavorary ho an'ny habaka ivelany. manana drafitra foana isika hoe: hamboly karazan-voa isan-karazany aho raha manana zaridaina, mitazona ny Lohataona miaraka amin'ny tara-pahazavana sy voninkazo. Na, raha manana efamira vitsivitsy amin'ny tokontany aho dia tiako ...